Waa ayo Kafaalo?
Kafaalo waa hay’ad Soomaliyeed oo caalami ah, la asaasay 2005. Xarunteedu tahay dalka Norway, isla mar ahaantaana faracyo iyo wakiilo kuleh Iswiidhan, Danmaark, Keenya, Holland iyo Ingiriiska (UK).
Hay’adda Kafaalo ujeedada ugu wayn ee loo asaasay waa u adeegidda umadda Soomaliyeed dhanka waxbarashada, caafimaadka, gargaaryada degdega ah iyo arimaha la xiriira bulshada. Ujeedooyinkaan oo qodobaysan waxaan kusoo koobi karnaa:
Kaqayb qaadashada yaraynta ama baa’bi’inta jahliga, gaar ahaan xagga wax qoridda iyo wax akhriska.
Kor u qaadidda tirada caruurta waxbarata ee katimid qoyayska tabaalaysan ee aan waxbarashada iska bixin karin.
Tayaynta qalabyada iskoolada ugu waxbarashada wanaagsan.
Sare u qaadida wacyiga iyo tayyada umadda Soomaliyeed iyo sidii ay ugaari lahaayeen isku filnaasho dhan walba leh.
Kor u qaadida tayyada iyo qalabyada goobaha caafimaadka.
Gacan ka gaysashada arimaha gargaaryada degdega ah.
Ku walaalaynta hawshaan iskaashiga umadda Soomaliyeed si ay u gaaraan nabad waarta iyo isjecayl
Hay’adda Kafaalo si ay uga miro dhaliso ujeedooyinkaas kore, waxay u maraysaa taabahaan hoose:
Ka kaalmaynta gunadda waxbarashada qoyayska tabaalaysan
U furista goobo lagu baro qorista iyo akhriska waalidiinta qoyayska tabaalaysan, si ay kor ugu kacdo tirada waxqori karta waxna akhrin karta ee umadda Soomaliyeed.
Miizaaniyad u raadinta iyo usoo iibinta qalabyo tayyo leh oo la gaarsiinayo iskoolada ugu wanaagsan.
Soo daabicidda buugaag, maqaalo iyo filimo lagu wacyi gelinayo umadda Soomaliyeed.
Qabasho seminars iyo aqoon iswaydaarsi dhinacyo badan leh.
Soo uruurinta iyo soo iibinta qalabyada caafimaadka kadibna u gudbintooda cusbitaalada waddankii.
U bandhigidda mashaaricdaan umadda Soomaliyeed iyo ka dhaadhicin inaan isku tashano, iskuna filnaano.
Idanka Eebe weyne, waxaa noo muuqda muddo gaaban inaan ku gaari karno inaan aragno Soomali inteeda badan wax akhrin/qori karta, jahligu ku yar yahay, isku filnaan karta, wada hadli karta, wax u qaybsan karta qaab kudhisan caqli iyo cilmi, arimahaas waxaa gundhig u ah inaan wanaagga iska kaashano, xaqiiq wax kudhisno, Rabbina talo saarano.
Cadaaladda, wada noolaasho iyo wax wada qabsiga.
Waxaan kasoo horjeednaa dulmiga iyo kala sooca umadda nooc walba ha ahaadee.
Qof walba inuu xaq uleeyahay waxbarasho iyo asaasiyaadka caafimaadka.
Waxaan u aragnaa caruurta iyo jiilalka soo koraya raasumaalka ummadda.
Masuuliyad dareenka waa biyo kama dhibcaan.
Amaano gudasho iyo dhawridda hantida umadda.
Balan oofin iyo run sheegid in lagu gaarayo guul aduunyo iyo mid Aakhiro.
Uma aragno xasilooni, horumar iyo wada noolaansho in lagu gaarayo magacyo qabiil iyo urur, balse iskaashi iyo wanaag kawada shaqayn ayaa guusha soo dhawayn kara.
Wadashaqayn, kala danbayn, nidaam iyo si caqliyaysan u wada hadlid, iyadoo lagu kala duwanaan karo fikrado kale.
Waxaan ugu yeeraynaa qof walba oo la jecel umadda Soomaliyeed ama aadanaha kale ee dunida saaran, wanaag, walaaltinimo, horumar aduunyo iyo mid Aakhiro, inuu Kafaalo qayb kanoqdo oo aan iskaashano.
Tirada Martida: 8948 - Update ugu danbeeyay: 06-11-2010
Visits: 698739 | :::::